Fitaovan-drivotra mafana, Extruder tanana, Welder Wedge mafana - Lesite
Basy mafana welding
Ny nozzles sy ny modely isan-karazany dia afaka mifanena amin'ny fampiharana hafanana samihafa
Machine Welding Tafo
Manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa rehetra amin'ny fitaovana tsy tantera-drano ny tafo
Ampiasaina amin'ny fanodinana ny HDPE, LDPE, PP ary thermoplastics hafa amin'ny injeniera marobe
Fuzhou Lesite Plastics Welding Technology Co., Ltd. maha-mpikambana ao amin'ny China Geosynthetics Engineering Association sy China National Waterproofing Building Association dia orinasa teknolojia avo lenta manokana amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famokarana ary serivisy consulting ara-teknika amin'ny milina fanodinana plastika sy indostrialy. fitaovana fanafanana.
Misokatra tanteraka sy nohavaozina ny aura
Ny fanavaozana vaovao amin'ny tranokala ofisialin'ny Sinoa Lesite dia an-tserasera
Amin'ny maha-marika fanta-daza eo amin'ny indostria, i Lesite dia nifikitra hatrany tamin'ny filozofian'ny fampandrosoana ny orinasa "mitady ny fahamarinana sy ny maha-pragmatika, ny mpisava lalana, ny fiezahana ho amin'ny tsara indrindra, ary ny fanompoana ny mpanjifa", ary tsy mitsahatra manavao sy mamerina ny vokatra Lesite miaraka amin'ny fanahin'ny asa tanana. ...
Fanambarana ofisialy: Efa an-tserasera izao ny tranonkala ofisialin'ny Lesite English!
Ny "tranonkala ofisialin'ny orinasa" dia varavarankely manan-danja ho an'ny orinasa hanehoana vokatra sy serivisy amin'ny tontolo ivelany, ary vato fehizoro lehibe ho an'ny orinasa hibodo ny tsena ihany koa. Mba hanomezana ny mpanjifa fahatakarana feno sy feno kokoa momba ny L...
Mifantoha amin'ny hery, mandrosoa | Fihaonana famintinana faran'ny taona Lesite 2020.
Niverina ny lohataona, fanombohana vaovao ho an'ny zava-drehetra. Nokapohina ny lakolosin’ny taom-baovao, ary namela marika lalina ny kodiaran’ny fotoana. Lavitra ny taona 2020 feno fanamby sy mampanantena, ary ho avy ny taona 2021 feno fanantenana sy mahery setra. 2021 dia tsy hoe n...
Taom-baovao sy fiainana vaovao miaraka amin'ny fanavaozana fonosana vaovao Ny fotoana dia mifanaraka amin'ny mpanenjika nofinofy, ary taona lohataona hafa indray izao. Raha manao jery todika ny taona 2020 isika dia hiara-handresy ireo fahasahiranana, hiasa mafy, na hijanona ho mafana toy ny taloha. Samy manana ny fijinjany ny tsirairay....